DHAGEYSO,,Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kormeeray goobaha biya mareenka ah ee caasimadda Muqdisho – Radio Baidoa
DHAGEYSO,,Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kormeeray goobaha biya mareenka ah ee caasimadda Muqdisho
By Webmaster	 On Mar 29, 2020
Xili ay foodda nagu soo hayaan xili roobaadka ayaa dowlada Hoose ee Xamar wax ay wadaa da’daallo lagu xoojinayo dib-u-habeynta goobaha biya mareenka ah ama bulaacadaha ee wadooyinka Caasimadda si aysan hakad u galin isku socodka gaadiidka iyo dad weynaha.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa howla kormeer ah ku sameeyay waraha loogu talagalay in lagu keediyo ama lagu xakameeyo daadka roobka.
Goobaha uu kormeeray guddoomiye Cumar Filish waxaa kamid ah Degmada Boondheere, Degmada Heliwaa, Qashin weynaha Muqdisho, Degmada Warta Nabadda iyo waddada Daaru-Salaama ee kala qeybisa degmooyinka Deyniile iyo Yaaqshiid.
Duqa magaalada Muqdisho ayaa inta uu kormeerkani kujiray waxa uu kula dardaarmayay maamulada degmooyinka iyo shacabka in ay muujiyaan kaalintooda ku aadan u diyaar garowga xili roobaadka iyo sidoo kale in la xoojiyo ilaalinta nadaafadda iyo bilicda Caasimadda.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa kormeerka kaddib waxa uu xarunta Degmada Heliwaa kulan kula qaatay Guddoomiyaha Degmada Cabdixakiin Cumar Cabdulle iyo mas’uuliyiinta kale ee degmada, kuwaasi oo uu ku bogaadiyay dib u habeynta ay ku sameeyeen xarunta, waxaana uu kula dar daarmay inay xoojiyaan Nadaafadda iyo u diyaar garowga xilli roobaadka.
DHAGEEYS,,maamulka Gobolka banaadir oo axariga kajarey xarunta Degmada shibis oo dib udhis casri ah lagu sametsey
Wasiir maareeyey oo cambaareeyey Qaraxii kadhacey Garoowe